Football Khabar » कोपा अमेरिका : आज कतार र अर्जेन्टिना भिड्दै, दुवै ‘गर कि मर’को अवस्थामा !
कोपा अमेरिका : आज कतार र अर्जेन्टिना भिड्दै, दुवै ‘गर कि मर’को अवस्थामा !
ब्राजिलमा जारी कोपा अमेरिका फुटबलमा आज दुई महत्त्वपूर्ण खेलहरू हुँदैछन् । आज एक खेलमा पाहुना टोली कतार र अर्जेन्टिना भिड्दा अर्को खेलमा कोलम्बिया र पराग्वे खेल्नेछन् ।
हाल अंक तालिकामा कोलम्बिया २ खेल जितेर ६ अंकसहित शीर्ष स्थानमा छ भने पराग्वे २ अंकसहित दोस्रो स्थानमा छ । कतार १ अंकसहित तेस्रोमा हुँदा लिओनल मेस्सीको टिम अर्जेन्टिना सबैभन्दा पुछारमा छ । उसको खातामा पनि १ अंक नै छ ।
आज हुने खेलमा कतार र अर्जेन्टिना भिड्दै दुवै ‘गर वा मर’को अवस्थामा हुनेछन् । किभने, अर्को चरण जान दुवैलााई उत्तिकै दबाब छ । र, दुवै एकै अवस्थामा छन् ।
अर्जेन्टिना आजको खेलमा स्पष्ट जित निकालेर अर्को चरणको यात्रा गर्न चाहन्छ । यदि उसले आज कतारलाई स्पष्ट गोलअन्तरमा हरायो र अर्को खेलमा पराग्वे कोलम्बियासँग पराजित भयो वा बराबरीमा रोकियो भने अर्जेन्टिना ४ अंक बनाएर शीर्ष दुईमा रहँदै सोझै अर्को चरण जानेछ ।
तर, यदि अर्जेन्टिनाले आफ्नो खेल जिते पनि अर्को खेलमा पराग्वेले स्पष्ट जित निकाल्यो भने अर्जेन्टिनालाई कठिन हुनेछ । त्यो बेला अर्जेन्टिनाका लागि उत्कृष्ट दुईको विधिबाट अर्को चरण जाने सम्भावना बाँकी रहन्छ भने पराग्वे कूल ५ अंकसहित सोझै अर्को चरण जान्छ ।
पहिलो खेलमा अर्जेन्टिना र दोस्रो खेलमा कतारलाई हराएर कोलम्बिया भने यसअघि नै नकआउट चरण पुगिसकेकाले उसलाई आज हारे पनि कुनै फरक पर्नेछैन ।
यता, कतार पनि आज अर्जेन्टिनालाई हराएर अर्को चरण जाने दाउमा छ । यदि उसले मेस्सीको टिमलाई स्पष्ट गोलअन्तरमा हरायो भने ऊ अन्तिम आठमा पुग्नेछ र अर्जेन्टिना समूह चरणबाटै आउट हुनेछ ।
आज कतार र अर्जेन्टिना बराबरीमा रोकिएको अवस्थामा पनि त्यसको फाइदा पराग्वेलाई नै पुग्नेछ । तसर्थ, आजको खेलमा अर्जेन्टिना र कतार दुवै जितका लागि संघर्ष गर्नेछन् । किनभने, यी खेलको ३ अंकले उनीहरूलाई उपाधिको बाटो देखाउनेछ । नत्र घर फर्किने बाटो ।
दुवै खेल आज राति नेपाली समयअनुसार (सोमबार बिहानको राति) ठीक १२ः४५ बजेबाट सुरु हुनेछन् ।
प्रकाशित मिति ८ असार २०७६, आईतवार ०४:५३